Ciidamada ammaanka magaalada Cadaado oo gacanta ku dhigay caruur laga soo qafaashay Puntland. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ciidamada ammaanka magaalada Cadaado oo gacanta ku dhigay caruur laga soo...
Ciidamada ammaanka magaalada Cadaado oo gacanta ku dhigay caruur laga soo qafaashay Puntland.
Wararka ka imaanaya magaalada cadaado ayaa sheegaya in Ciidamada ammaanka magaaladaasi ay ku guuleysteen iney soo qabtaan caruur laga soo qafaashay mid ka mid ah magaalooyinka deegaanada Puntland.
Caruurtaan oo tiradooda lagu sheegay 8 ayaa lagu hayay gudaha magaalada Cadaado iyadoo laga soo qafaalay magaalada Qardho, waxeyna ciidamada si awood ah u soo qabteen Caruurta oo laga soo badbaadiyay dadkii heystay.
Gudoomiyaha magaalada Cadaado ayaa sheegay iney goor hore heleen xogta ku saabsan caruurta, balse ay ku guuleysteen iney soo furtaan, waxeyna ku wareejiyeen aabaha dhalay caruurta oo ay muddo laba sanadood ah ka maqnaayeen.
sidoo kale Aabaha caruurta ayaa u mahad celiyay maamulka magaalada Cadaado iyo dadka shacabka ah kuwaas oo gacan ka geystay in loo soo helo caruurtiisa, wuxuuna ugu baaqay kooxda loogu yeero jaamacadda Takfiir iney joojiyaan caruurta ay dhuumashada dadka uga qaadanayaan.
Previous articleMaxoow ka yiri Ra iisal wasarahii hore Xasan Cali Kheyre magacaabida Ra iisal wasaaraha Cusub
Next articleDowlada Norway oo lacagta Kaalmada ka dhimeysa Ajaanibta aanan baran Luuqada (da’dooda oo lasoo bandhigay)